April 2022 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Apr 30, 2022 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran idaacada Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Dhagayso dhuuxa Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 30-09-1443, oo…
Al-Shabaab: “Berri waxaa la dhameystirayaa Soonka” (Bayaan)
cusmaan	 Apr 30, 2022 0
Iyadoo dadka Soomaaliyeed ay aad ugu dhag taagayeen warka ku saabsan in berri la ciidayo amaba soomka la dhameystirayo ayaa waxaa goor dhow war arrintaasi ku saabsan soo saaray Xarakada Al-Shabaab oo arrimahan ay dadku had iyo goor ka…
Sawirro: Wilaayada Jubbooyinka oo Dadka Faragurow Siisay Lacag Ay Ku Ciidaan.
Wilaayada islaamiga ah ee Jubooyinka ayaa 100 kamid ah dadka xanuusan ee deegaanka Faragurow Siisay Lacago Ciid ah kadib munaasada ka dhacaday Deegaanka Faragurow. Mashruuca afruinta oo ay bar bar socotay ciidsiinta dadka…
Dhageyso Kitaabka Keyfa Caamalahum ﷺ Oo Uu Jeedinayo Sheekh Cali Katiin (53).
Col. Saney oo Ka Badbaaday Qarax Lagana Dilay 12 Ilaaladiisa Ah.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay qarax culus la beegsatay kolonyo gaadiid ah oo galbinayay Col. Saney Cabdulle oo kamid ah saraakiisha milatariga DF. Saney ayaa xalay kasoo guureeyay magaalada Muqdisho isagoo sida…
Wilaayada Jubbooyinka Oo Lacag Ciidsiin ah siisey Dadka Faragurow. (Sawirro)
Axmad	 Apr 29, 2022 0
Wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa deeq lacag ah oo ciidsiin ah waxay siisey dadka kunool deegaanka Faragurow ee hoostaga magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Sheekh Muxamad Abuu Cabdalla, waaliga wilaayada…
Ugu yaraan 20 ruux ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen isku dhacyo u dhaxeeyay kooxo hubeysan oo dhacay duleedka magaalada Port-au-Prince ee caasamadda wadanka Haiti. Warbaahinta dalkaas ayaa ku warantay in dadka ku…